घरमा लुगा को रंग कसरी पुनर्स्थापना?
Homeliness, यो आफैलाई के
दुर्भाग्यवश, मूल सधैंभरि पनि आधुनिक लुगा धुने पाउडर र विशेष हेरविचार उत्पादन संग लुगा को उज्ज्वल रंग राख्न सक्दैन। आफ्नो मनपर्ने कुरा हेर्दा, ढिलो होस् वा चाँडो त्यहाँ एक क्षण आउँछ, तपाईं त्यो पहिले नै निराशा फिक्का थियो, थाहा र यो केहि समय थियो। तर फिक्का ब्लाउज बाहिर निकाल र फिक्का टी-शर्ट मनमोहक हुन थियो। वास्तवमा, लुगा को रंग पुनर्स्थापना कसरी साँच्चै उपयोगी र प्रभावकारी सुझाव, धेरै छन्।
नियम, त्यहाँ कुरा कसरी धुन भन्छन् कि ट्याब छ हरेक नयाँ कुरा (पानी तापमान उपयुक्त, यो धोए कि सकिँदैन र वाशिंग मिसिन मा काता, र यति मा छ। आदि)। यी निर्देशन अनुपालन एक लामो समय को लागि उत्पादन को सुन्दर उपस्थिति राख्न हुनेछ।
पहिले लुगा धुने कुराहरू आवश्यक रंग द्वारा विभाजित गर्नुपर्छ। कुराहरू केही चलान र लुगा बर्बाद हुन सक्छ - कुनै मामला मा छैन सँगै कपडा contrasting धोए गर्न सकिन्छ।
तपाईं ठीक उपयुक्त डिटर्जेंट वितरित गर्न आवश्यक छ कि भूल छैन। लागि रंग उत्पादनहरु सामान्यतः रंग-coded संग पाउडर प्रयोग गरिन्छ। यो लेबल डिटर्जेंट कुराहरू रंग लागि उपयुक्त छ भन्ने संकेत गर्छ।
सबै वस्तुहरू राम्ररी विशेष गरी रंग र गाढा कपडे लागि rinsed हुनुपर्छ। यो उद्देश्य आधुनिक वाशिंग मिसिन लागि त्यहाँ अतिरिक्त कुल्ला को एक समारोह छ।
तर, यस्तो पनि साथ सिफारिसहरू पाल्तु जनावर वस्त्र अक्सर यसको पूर्व रंग चमक हराउछ। यो योगदान हुन सक्छ:
धेरै लुगा धुने र दल्नु कपडे।
को कोठरी मा दीर्घकालीन भण्डारण।
एक फिक्का छाया पुनर्स्थापना गर्न मद्दत गर्नेछ
पछि रंग गहिराई प्राप्त र निम्न सामाग्री प्रयोग चमक गर्न सम्पूर्ण सफल washings बारम्बार वा छैन:
• नपाकेको पागल को खोल;
• प्याज खाल;
• उमालेर बनाउनु कालो चिया;
• बेकिंग सोडा;
• भद्दा नुन पाक;
• नम्र ब्लीच।
यी घटक को सही प्रयोग संग लुगा को रंग कसरी पुनर्स्थापना थाह, तपाईं एक आश्चर्यजनक प्रभाव हासिल गर्न सक्नुहुन्छ।
यो पदार्थ प्रयोग - सबैभन्दा विश्वसनीय र सिद्ध तरिका को एक दिन लायक लुगा को प्रकारको पुनर्स्थापना। सामान्यतया, यो प्रति पानी 1 लिटर 20 एमएल को दरमा पतला छ। ऊन वा कपास को फिक्का उत्पादन कोठा तापमान मा यस्तो समाधान मा राखिएको र 15 मिनेट को लागि बाँकी छन्।
उत्पादन ब्लीच हुन हो भने, समाधान अलि ब्लीच थपिएको छ। 30-40 मिनेट यस्तो मिश्रण आफ्नो स्फटिक सेतो कुराहरू हासिल गर्न उसिनेर छ। तर, आफ्नो लेबल धुने मा पानी को तापमान मा कुनै प्रतिबंध हो भने उत्पादन, उसिनेर गर्न सकिन्छ।
सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग गाढा रंग को चमक बहाल गर्न मद्दत गर्छ। पहिलो, एक समाधान प्रति पानी 1.5 लिटर 20 ग्राम को सुर्ती विशेष दर तयार पारे। परिणामस्वरूप मिश्रण एक घण्टा बस्न पर्छ। अर्को, ब्रश वा तौलिया तयार समाधान समान रूप रंग गुमाएका थिए जो कपडे, अधिक वितरण गरिएको छ।
प्याज बोक्रा को मद्दतले लुगा को रंग कसरी पुनर्स्थापना, अझै हाम्रा पुर्खाहरूले थाहा। यो कुशल विधि वस्त्र को खैरो र हरियो रंग लागि आदर्श छ। आवश्यक रकम प्राप्त गर्न, तपाईं पानी साधारण प्याज बोक्रा एक लामो समय को लागि खाना पकाउन गर्न आवश्यक छ। परिणाम दिन जो एक फिक्का र भौतिक सुनको-खैरो वा हरियो रंग पखालियाे हुनेछ बलियो समाधान छ।
तर पहिले, गलत पक्ष बाट ऊतक को एक सानो टुक्रा मा, टोन परिवर्तन हुनेछ कि जाँच गर्नुहोस्। इच्छित रंग प्याज को समाधान को एकाग्रता परिवर्तन गरेर प्राप्त गर्न सकिन्छ।
स्टार्च - ठूलो दाग रिमुभर
कसरी कुराको गलत रंग संग धोइदिनुभएर पछि लुगा को रंग पुनर्स्थापना? यहाँ सहायता स्टार्च आउँछन्। तुरुन्तै पछि पत्ता लगाउने स्थलहरू भोगे लुगा स्टार्च, साइट्रिक एसिड, सोडियम क्लोराइड र बराबर रकम लिइएका र एकै रातमा बाँकी साबुन चिप्स को एक मिश्रण संग उपचार देखियो। त्यसपछि कुरा धुन र न्यानो पानी संग राम्ररी कुल्ला गर्न थप समय आवश्यक छ।
हल्का ब्लीच रासायनिक उत्पादन
आज, निर्माता फिक्का लुगा पुनर्स्थापना गर्न विशेष उपकरण धेरै प्रस्ताव। नियम, तिनीहरूले लाँड्री धुने समयमा प्रयोग गरिन्छ। तैपनि, आफ्नो प्रयोगको पूर्व ध्यान आपूर्ति निर्देशन, अन्यथा प्रभावित वस्तुहरू पूर्ण SPOILED गर्न सकिन्छ विचार गर्नुपर्छ।
आनन्द मनपर्ने रंग
कसरी घर मा लुगा को रंग पुनर्स्थापना, राम्रो तरिकाले हाम्रो आमा र हजुरआमा सम्झना। सेतो सामान पुनर्स्थापना र संरक्षण गर्न प्रभावकारी तरिका - धुन र विरंजन एजेन्ट संग भिजेको। र सेतो मद्दत ताजा हाइड्रोजन पेरोक्साइड वा पोटासियम Permanganate एक कमजोर समाधान छ। पनि पारंपरिक साबुन प्रयोग सफाई र ताजगी बनाइराख्न सहायता।
यो लामो terracotta, क्रीम र बेज रंग उत्पादनहरु कमजोर चिया समाधान मा rinsed केही मिनेट पुनर्स्थापना भएको छ। यो विधि सफलतापूर्वक स्फूर्ति रंग नायलन मोजा लागि लागू गरिएको छ - रंग गहिरो र थप तीव्र बनेर।
गुलाबी, आरु रंग र सजावटी मुद्दा
पानी मा नाजुक फूल को rinsing समयमा तपाईं अमोनिया को spoonfuls को एक जोडी थप्न आवश्यक छ। लुगा धुने अघि सजावटी सूत्रहरू संग कढाई लुगा छोटकरीमा न्यानो नुन पानी मा भिगो गर्नुपर्छ। समाधान को अधिकतम एकाग्रता प्रति तरल को लीटर नुन को एक ठूलो दुई चम्मच मा प्रयोग गरिनुपर्छ प्राप्त गर्न। कि पछि, उत्पादन Soapy पानी मा धोए र राम्ररी rinsed छ। एक पटक वस्तुको पूर्ण सुक्खा छ यसलाई राम्ररी उल्टो पक्षमा ironed।
कालो कालो रहिरहन्छ गरौं
कालो वा गाढा रंग को उत्पादन को लागि दैनिक पहनने धेरै व्यावहारिक छन्। तथापि, धेरै लुगा धुने तिनीहरूलाई नकारात्मक असर - यी रंग अलि फिका र आफ्नो पूर्व चमक गुमाउन।
सुरक्षित र घर मा लुगा को कालो रंग कालो चिया वा सुर्ती समाधान को चिया पात मदत गर्नेछ बहाल। एक सानो तरोताजा र रंग को गहिराई को नुन पानी कुल्ला मदत गर्नेछ प्राप्त। गाढा रंग को उत्पादन विशेष हालतमा रङ्ग गर्न सक्नुहुन्छ, हार्डवेयर स्टोर मा बेचिन्छ। यस्तो विधि पूर्ण कुराहरू कहिलेकाहीं सखाप भने, रंग align हुनेछ।
लुगा को नीलो रंग कसरी पुनर्स्थापना
ताजा र वस्त्र रातो र नीलो रंग को एक बिट साधारण सिरका वा बेकिंग सोडा संग कुल्ला मदत गर्नेछ बहाल। सोडा को धो नीले वस्तुहरू समयमा थप गर्न सकिन्छ: पानी को गैलन प्रति केवल एक चम्मच लुगा को प्रस्तुति को फिर्ती योगदान पुग्छ। सानो रकम मा जैविक एसिड मदत भन्ने तथ्यलाई कुनै पनि उज्ज्वल रंग बलियो बनाउन र स्थायी रूपमा उत्पादनहरु को ताजा उपस्थिति राख्ने।
धेरै धेरै न्यानो पानी मा भंग, अमोनिया प्रयोग गर्न सल्लाह छन्। केही घण्टा संग नीलो र नीलो वस्तुहरूको समाधान राख्नु हराएका चमक प्राप्त हुनेछ।
सूर्य मा फिक्का वस्त्र को रंग, कसरी पुनर्स्थापना?
कपडे लागि विशेष रङहरू प्रयोग गर्न मद्दत गर्नेछ वस्त्र को सूर्य-प्रक्षालित रंग बहाल। यस्तो रकम को प्रयोग संलग्न निर्देशन को सही उत्सव हुनुपर्छ। कहिलेकाहीं, रंग हराएको प्रभावित वस्तुहरू फिर्ता गर्न, यो यस्तै रंग अन्य कुराको धुन गर्न पर्याप्त छ।
मछलीघर सीलेंट कसरी प्रयोग गर्ने: चरण निर्देशनहरूको द्वारा कदम। कसरी सुक्खा जलजीवालय सीलेंट?
सुन्दर घर इलाका - मुख्य घटक
तपाईंको आफ्नै हात KARAMBIT कसरी बनाउने
को Chainsaw देखि Sawmill। कसरी आफ्नो हात संग chainsaws को sawmill बनाउन
कृत्रिम संगमरमर आफ्नो हातले प्लास्टर बनाइएका कसरी बनाउने?
कसरी आफ्नै हात, सुझाव र चाल संग एक टर्च बनाउन
व्लादिमीर Konstantinov: रूसी अमेरिकी नागरिक
बिश्कोक शहर आकर्षण र वरिपरि चासो स्थानहरू
नालीदार तार: व्यास, विशेषताहरु
"एन्ड्रोइड" मा नगद कसरी अनप्याक गर्न?
कसरी आकर्षित गर्न सिक्न?
खट्टा क्रीम मा कलेजो
घुम्टो - के छ? आशय र euphemisms
जो तारा प्रणाली अवस्थित?
आय र परिवारको खर्च - विशेष गरी गणना र सिफारिसहरू
कसरी एक स्वादिष्ट uzvar प्राप्त गर्न सुकेको फल खाना पकाउनु?
विज्ञापन समूह "VKontakte": पोस्ट कसरी?
Azura Deluxe Resort & Spa Hotel (टर्की): सामान्य विवरण र फोटोहरू